Luz de Maria-Ixesha li "ngoku"! -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Ingcwele uMikayeli ingelosi enkulu ukuze	NguLuz de Maria de Bonilla nge-19 ka-Agasti ka-2020:
Abantu bakaThixo: Fumana uXolo ngoxolo oluyimfuneko kuye wonke umntu.
Ngexesha apho ingqumbo yoluntu iya kuphakama kumazwe amaninzi emhlabeni kwaye amadoda aya kuhlasela abantakwabo noodade wabo; kwaye xa uxolo luya kubakho ngomnqweno kwaye unqweneleki ngenxa yokuba ukungqinelani kufakelwe eMhlabeni, zibuze: Ngaba ukuliphi ixesha kwi-Apocalypse?
Xa ubona abo babedla ngokuya kuMthendeleko wemihla ngemihla kwaye besamkela uMthendeleko… Xa ubona abo babethandaza ngamaxesha onke nakwiindawo, abo bangashiyanga mathandabuzo ngokuhlonela kwabo inkolo yabo… Xa ubona abo babenxiba benesidima ngenxa yemingxunya yabo ngenxa yokoyika intshutshiso kunye nokukhanyela uKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu "njengeNkosi yabo noThixo wabo" ukuze basindise ubomi babo… Qiniseka ukuba intshutshiso ayizukuncipha, kodwa endaweni yoko iya komelezwa ngokuchasene nabantu bokwenene beNkosi yethu kunye noKumkani uYesu Kristu.
Kwiindawo ezikude, kwiikristale zeecawe zakudala, kwiindawo eziphuculweyo, mhlawumbi ngeyona ndlela ingafane yenzeke, uya kuza kumamela iMthendeleko eNgcwele kwaye wamkele uKrestu ekhoyo kwi-Ekaristi eNgcwele evela ezandleni zabefundisi abathembekileyo-abo banqula uKrestu kwi-Ekaristi. abathanda uKumkanikazi wethu kunye noMama wezulu noMhlaba-ngenxa yolwahlulo olucacileyo noluchanekileyo phakathi kwabo baya kuhlala beqhotyoshelwe kwi-Magisterium yinyani yeCawe yeNkosi yethu kunye neNkosi uYesu Krestu kunye nababephila njengabaFarisi ngaphakathi kwiCawa, sele singabatshutshisi abantu abathembekileyo.
Abantu bakaThixo: Musani ukuzenza njengabaFarisi (Mt. 23); yenza njengabantwana abathembekileyo kuKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu, ukuguqula, ukujongana nokuhlanjululwa okuzayo okuvela ezulwini ukuya emhlabeni kunye nokulandelelana kweziganeko ezakwaziswe kuwe kwangaphambi kwexesha ukuze uthandaze, unikele ngokuzila nangokuzincama; ukuze uncede abasweleyo nabasweleyo, usondeze isonka sobungqina bokuphila ngokuthanda kukaThixo.
Umntu unenkululeko yokuzikhethela, ebefanele ukuba ayisebenzise ukunqula, ukusebenza nokwenza njengomntwana wokwenene kaThixo, ukuba athobeke kwaye angabi nekratshi kwaye azingce. Onekratshi uya kuza emendweni.
Thandaza ngexesha kunye nexesha; uyeza omkhulu bona kwakho UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu NguMark Mallett ixesha ixesha alisekho, lilixa ngoku oko bekulindwe kwaye boyikiswa. Ngaphandle kokuma kunye nabafuna ukuba ulahleke, qhubeka kwindlela ebonisiweyo ngaphandle kokuphambuka kuyo, ngaphandle kokulibala ukuba usathana uhamba njengengonyama egqumayo ekhangela ukuba ngubani na ongamqwenga. Yiba nobulumko emsebenzini nakwizenzo zakho, ungangqungqanga kunye nabadidekileyo; Lumka ke nina, nina bantu, ungabi ngabantwana bobugwenxa. Icawe yeNkosi yethu kunye neNkosi yethu uYesu ihlupheka kakhulu. Iimpazamo ziya kubangela ukuphulukana nokholo, yiyo loo nto ukholo olungagungqiyo lufuneka kangaka, ukholo kubukho beNkosi yethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu ngamnye woonyana neentombi zakhe. bona kwakho Ukukholelwa kuYesu kuYesu NguMark Mallett
Thandazani, bantwana bakaThixo, thandazelani ukuguqula konke.
Thandazani, bantwana bakaThixo, nithandaze ukuba niqhubeke nithembekile.
Thandaza, thandazela amazwe aza kubandezeleka xa engcungcutheka kwaye engafuneki.
Thandaza, uthandazele abo, bakonganyelwe likratshi, abaya kukhokelela kubantakwabo noodade wabo.
Thandazela abo bathwaxwa yindlala, kunye nabo banyamezele imbandezelo ngenyaniso ngokubhekisele kubalawuli boMhlaba.
Bathandekayo abantu bakaThixo, ixesha elizayo liza kuba yinkohliso: ungaphambuki. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuthandaza ngentliziyo yakho, ukuba ulungiselele uXESHA OLUKHULU, Izityhilelo kuLuz de Maria malunga nesilumkiso esikhulu sikaThixo eluntwini… Nawe unoxolo.
Thandazela i-Chile kunye neColombia. Iiprojekthi zobubi aziyi kuma.
Ekugqibeleni, Intliziyo engaqhelekanga yoKumkanikazi wethu kunye noMama wezulu noMhlaba wezulu kwaye uya koyisa kwaye ububi abuyi kumchukumisa umntu.
Abantu bakaThixo: Sukuyeka! La ngamaxesha okuba uhlale ulindile. Ungalibali ukuba isilumkiso siyeza, kwaye iya kubetha umntu njengombane.
Ngubani na onjengoThixo? Akukho unjengoThixo,
bona kwakho UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu NguMark Mallett
bona kwakho Ukukholelwa kuYesu kuYesu NguMark Mallett
Izityhilelo kuLuz de Maria malunga nesilumkiso esikhulu sikaThixo eluntwini…
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo, Isikhanyiso seSazela, Isilumkiso, ukuRhoxiswa kwakhona, kunye noMmangaliso.
← Pedro Regis - Uwexuko Uza
IMedjugorje - Ububi buza kuyeka… →